Musa ukothuka! Umthamo weMask uyalulama
Ukubuyiswa kweMask kwe China kwilizwe liphela: Imaski yokuvelisa imaski kwisiqingatha sokuthumela emhlabeni
Ukuthintela izifo zokuphefumla
Yintoni ekufuneka siyazi malunga neemaski ngendlela yokunxiba imaski? (yenza kwaye ungakwenzi)
ngu admin nge-20-04-02
faka umbala: kufuneka uhlale kwindawo yonke ngalo lonke ixesha: ungaze uyitsibe xa ushiya igumbi, okanye xa uthetha nomguli okanye ufuna ukuphefumla lula yeyiphi imaski elungileyo? ngohlobo lwenkqubo: inqanaba lokhuseleko (eliphantsi, eliphakathi okanye eliphakamileyo) lokuthuthuzela kunye nokulingana: ukhululekile kwimpumlo yento ...
Njengoko imfuno yehlabathi leemaski iqhubeka isanda, i-China ngoku inokuthi ngokuthe ngcembe iphindwe kabini. U-Tan Qunhong, umphathi jikelele womenzi omncinci wemaski ophakathi kuMazantsi e-China, uthe ugqibile ukuthenga urhulumente wase China kwaye ngoku eqala ukuthumela impahla ngaphandle. Kwisongezelelo ...
Imaski ekhuselayo yenye yamanqaku okhuselo asebenzayo ukukhusela izifo ezosulelayo, ezinendima ebalulekileyo kulawulo lwezifo zokuzikhusela. Kubaluleke kakhulu ukufezekisa imigangatho ekumgangatho wokuphefumla ukuqinisekisa impilo kunye nokhuseleko lwabantu. Xa sele kukho ...
Ngokuqhubeka okuqhubekayo kwemeko yobhubhane, ukusetyenziswa kweemaski kukonyuke kakhulu. Yonke imaski engaphezulu eveliswayo yokhuseleko olungakumbi lwabantu nakubasebenzi bezonyango. Amasebe anobuchule kunye namashishini okuvelisa ahambelana nawo abaleka ngexesha. Ngoku ka ...